Volterman Inosvitsa iyo Concept ye Smart Wallets | IPhone nhau
Volterman anotangisa pfungwa ye Smart Smart wallets
Zvigadzirwa zve smart zvinotifashamira… mafoni, mawadhi akangwara, mwenje mwenje ... kunyangwe vagadziri vekofi vakangwara. Asi Tiri kushaya chimwe chinhu chatinogara takatakura nacho uye icho kunyangwe kuyedza kwezera redhijitari kuchipedza, chakapona chisina kuchinjika kwemakore:. Icho chakakosha chinowanikwa muhupenyu hwedu uye chinogadzira ruzivo rwakawanda, chinogona kuitwawo kuti chive chakangwara, uye Volterman anoda kuzviratidza.
Nemhando mitatu yakasiyana yezvishongedzo (kadhi mubati, chikwama uye chikwama chekufambisa) izvo zvese zvinosanganisira zvakafanana mabasa (kunze bhatiri, isina waya kuchaja, GPS locator, WiFi Hotspot, anti-kuba system uye daro alarm) Volterman anoda kuti chikwama chiende kure kupfuura kutakura makadhi edu nemabhiri, zvichiita kuti zvive zvakakosha zvakare.
Volterman anoti anoda kuchengetedza mhando yezvikwama zvemhando yepamusoro nezvikwama, izvo zvaakashandisa zvinhu zvakanakisa mukugadzira zvishongedzo zvake. Asi chinhu chakakosha chaicho chinouya mukati, ine GPS yekukwanisa kuwana chikwama munguva chaiyo chero kwazviri, kamera inozobata kumeso kweuyo wese anovhura chikwama kana arasika maitiro, 3G yekubatanidza kuti igare yakabatana uye ichishandira seWiFi yekupinda poindi, yakavakirwa-mukati 2000 kusvika 5000mAh bhatiri zvichienderana neakasarudzwa wallet modhi, uye mukana weasina waya recharging (Qi) yako iPhone kana chero imwe smartphone. Iyo inogadzirwawo kuti isadzivirire mvura uye ine tambo dzakasiyana (mheni, microSUB uye USB-C) kudzoreredza mhando dzese dze mafoni.
Mutauri anopedzisa zvigadzirwa zvemagetsi zvirimo kuridza alarm kana ukasiya chikwama chako kumwe kunhu, uye nekutenda kune app yeApple neApple, zvakafanana zvichaitikawo kana izvo zvaunosiya zviri zvako nhare. Uye zvakare, nekuda kwekushandisa kwakanaka kweprojekti, ivo vakwanisa kupa iyo portfolio ne SD slot ye 32GB kadhi iyo inoshandiswa kugadzira makopi ekuchengetedza ezvinyorwa zve smartphone yako.
Mitengo yemhando dzakasiyana siyana kubva $ 109 yemubati wekadhi, iyo yakapusa modhi ine 2000mAh bhatiri, $ 149 yeyakajairwa chikwama ine 2600mAh bhatiri, uye $ 175 yeiyo hombe yekufambisa chikwama ine bhatiri inosvika 5000mAh. Kana iwe uchida zvese zvishandiso, kusanganisira isina waya yekuchaja doko yewallet yako uye yako smartphone, mutengo uri $ 385. Kugadzirira kwako kana rumwe ruzivo iwe unokwanisa kuwana iro peji rerojekiti kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Volterman anotangisa pfungwa ye Smart Smart wallets
Maitiro ekumanikidza kuvhara programu muWatchOS 4